राजनीतिक निकाश काँग्रेसबाट मात्रै सम्भव भएको काँग्रेस महामन्त्री डा. कोइरालाको भनाइ
By administrator on	 January 29, 2021 देश, फोटो फिचर, स्थानीय
कावासोती, १६ माघ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोईरालाले नेपाली काग्रेसको आन्दोलनले मुलुकलाई सहि निकाश दिने बताउनुभएको छ । नेपाली काग्रेस अहिलेको निकाश संसद पुर्नस्थापना र निर्बाचन दुबैलाई संगसंगै लिएर अघि बढे पनि संसद पुर्नस्थापना पहिलो काँग्रेसको एजेण्डा भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाली कागेस नवलपुरले आज शहिद दिबसका अबसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली काग्रेसका महामन्त्री डा.कोइरालाले सो बिचार ब्यक्त गर्नुभएको हो । मुलुकमा अहिले देखिएको संकटले कतै लोकतन्त्र धरापमा त पर्ने होईन भन्दै नेपाली काग्रेस एक भएर बर्तमान संकटको सामाना गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । मुलुकमा आइृपर्ने हरेक संकटको निकाश काग्रेसबाट मात्रै पुरा हुने भएकाले अहिलेको निकाश पनि काग्रेसले समाधान गर्ने महामन्त्री डा. कोइरालाले बताउनुभयो ।
उहाँले बीपी कोइरालाले मार्ग निर्देशन गरेको समाजबाद नै अहिलेको उत्तम बिकल्प भएको र अब काग्रेसले आगामी निर्बाचनमा बीपी बिचारलाई आत्मासाथ गर्दै अघि बढने बताउनुभयो । अब संसुद पुर्नस्थापना भए पनि नभए पनि काग्रेसको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आएको बताउँदै महामन्त्री डा. कोइरालाले नेपाली जनताले अब काग्रेसलाई चुनाबमा जिताएर मुलुकको जिम्मा लगाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
जिल्ला सभापति तथा गण्डकी प्रदेशका सांसद बिष्णु लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश का नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, संबिधानसभा सदस्य महेन्द्रध्वज जीसी ,प्रदेश सांसद ओमकला गौतम ,दुर्गाबहादुर राना, दो्रर्णबन सन्यासी, ओम सापकोटा , रुद्र कडेल लगायतले काग्रेस शहिदले देखाएको बाटोमा हिडन् सक्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।